जनताको सेवक पार्टी कांग्रेस – श्वेता खड्का
२० वैशाख, काठमाडौं । ‘कोहिनुर’ फेम्ड अभिनेत्री श्वेता खड्का मंगलबार नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकी छन् । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको छेकोमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्वेतासहित अभिनेता भुवन केसी र रविन्द्र खड्कालाई पार्टी प्रवेश गराए ।
अभिनेत्री खड्काले अबदेखि आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने बताएकी छन् । समाजसेवा, फिल्म र व्यापारलाई सँगै अघि बढाउने जनाउँदै उनले कांग्रेसमार्फत महिलाका अधिकार उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
कलाकारलाई राजनीतिको ज्ञान हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनी स्वार्थ र पोजिसनको लागि राजनीतिमा नआएको दाबी गर्छिन् ।
मेरो ब्लड नै कांग्रेस हो । मेरो जन्म नै कांग्रेस फेमिलीमा भयो । मेरो बुवा, हजुरबुवा र सबै फेमिली कांग्रेस समर्थक हुनुहुन्छ । बच्चादेखि नै कांग्रेस माहौलमा हुर्किएको हो । त्यो एउटा कारण भयो । भित्रैदेखिको आकर्षण एउटा भयो । अर्को कुरा पछिल्ला केही वर्षमा हामीले जति दुःख पायौं, केही काम भएन, हामी जहिल्यै तनावमा छौं ।
जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति गलत हुन्छन् र धन्दामुखी हुन्छन् भने चुप लागेर बस्नुहुन्न । जनताले पनि के कस्तो भनेर छुट्याउनुपर्छ । अहिले त प्रविधिको युग छ । जनता पनि स्मार्ट भइसके ।
हामीले एउटा पार्टीमा आएर काम गर्न सक्यौं भने केही हदसम्म परिवर्तन हुनसक्छ । काम गर्ने सही समय हो यो, तर दुःख पाउनुभएन हामीले । अब हामीले पनि लड्नुपर्ने बेला आयो भन्ने हाम्रो आवाज छ । हामीलाई विश्वास गर्दिए, काम गर्न सक्छौं भन्ने हिम्मत हामीमा छ भनेर राइट टाइम आएजस्तो लाग्यो अनि प्रवेश गरें ।
उद्देश्य धेरै छ । काम गर्न मन छ । राजनेता भएर होइन कि जनताको सच्चा सेवक भएर काम गर्नु मन छ । म सक्रिय राजनीतिमा लाग्छु र काम समर्पित भएर गर्छु । देशकै लागि काम गर्न सक्ने लिडरसिप आउनुपर्छ ।
मलाई धेरै ठाउँमा काम गर्नु मन छ । अझै पनि मानव बेचविखन कायमै छ । महिलाहरु धेरै पछाडि छन् ।हरेक कुरामा केटाले गरे सही, केटीले गरे गलत भन्ने मान्यता छ । समानता भनेको छ, तर समानता कहाँ छ भन्नुस् न । सरकारले ३० प्रतिशत महिला सहभागिता भनेको छ । तर ५० प्रतिशत कहिले हुन्छ ? बोलेरै भन्दा पनि काम गरेर देखाउन मन छ । अवसर पाएँ भने प्रमाणित पनि गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई ।
धेरै कुराकानी भएको छ । कलाकारलाई मनदेखि स्वागत गर्नुभयो, तर हामीले गरेको कामको निगरानी पनि राख्नुभएको रहेछ । खुसी लाग्यो । हामीले सामाजिक क्षेत्र र फिल्म उद्योगमा गरेको कामको योगदानलाई देशको प्रधानमन्त्रीले ख्याल राख्नुभएको रहेछ । पार्टी प्रवेशको क्रममा उहाँले हामी सँगै हिंड्छौं, राम्रोसँग काम गर्छौं, देश र जनताको लागि धेरै काम गर्छौं भन्नुभयो । म प्रभावित भएँ ।
कलाकार पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अधिकार छ नि । के कलाकार भएर राजनीतिमा आउनुहुन्न ? के कलाकार भएर फिल्म मात्र खेल्नुपर्छ ? कलाकार भएर बिजनेस नै गर्नुहुन्न ? कलाकार भएर सामाजिक कार्यमार्फत आवाज उठाउन हुन्न ? कलाकार पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्ने अधिकार छ नि ।
चाहेको क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा मलाई लाग्छ, दर्शकले झन् बढी सपोर्ट गर्नुहुन्छ । बाहिरको आरोप होला, तर मनदेखि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । हामीले कल्पना गरेर, दुःख भुलेर फिल्म बनाउँछौं । भावुक हुन्छन् नि कलाकारहरु पनि ।
। सम्पूर्ण नभए पनि आधारभूत ज्ञान हुनुपर्छ । आफ्नो पृष्ठभूमि थाहा हुनुपर्छ । लहैलहैमा भन्दा पनि बुझेर प्रवेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
२०७९ बैशाख २०, मंगलवार १४:४३0Minutes 95 Views
पूजा लेख्छिन् : विरोधी हैन, मानवको नजरले हेर्नूस !
वरिष्ठ डाक्टर भोला रिजाल उभिए राजेन्द्र लिङ्देनको पक्षमा !
आजसम्म धेरै फन्टुसलाई हेरियो, यसपटक बालेन शाहलाई हेरौ- भिम उपाध्याय